IEritrea Ivalela AmaNgqina KaYehova Ngenxa Yokholo Lwawo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa
IEritrea iwavalel’ entolongweni amaNgqina kaYehova nabanye abantu abakhonza kwezinye iinkonzo ingakhange ibamangalele okanye ibaxoxise ezinkundleni. Amadoda, amabhinqa, abantwana kunye nabantu abalupheleyo abangamaNgqina bavalelwa kuba nje bekhonza okanye ngenxa yezizathu ezingavakaliyo. Abafana bathothoziswa kwezimnyama kuba nje bengavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo.
Xa iEritrea yaba lilizwe elizimeleyo ngo-1993, amaNgqina kaYehova alahlekelwa yinkululeko yawo. UMongamel’ uAfewerki wayohlutha inkululeko yamaNgqina yokuba ngabemi belo ngo-Oktobha 25, 1994, kuba ayengakhange abandakanyeke kunyulo lwezopolitiko lwango-1993 yaye ayengafuni nokuya emkhosini. Ukususela ngoko, iEritrea iye yaqhubeka ivalela, ingcungcuthekisa yaye ixhaphaza amaNgqina kaYehova ngelinge lokuwohlutha ukholo.
Ukuvalelwa Phantsi Kweemeko Ezingaginyisi-mathe
UPaulos Eyassu, uIsaac Mogos noNegede Teklemariam babanjwa ngoSeptemba 24, 1994, kuba bengazange bavume ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Amanye amabanjwa angamaNgqina avalelwa kwizisele ezenziwe ngecangci ezinye zenziwe ngelitye okanye ngentsimibi yaye zigrunjelwe phantsi komhlaba. Elinye ibanjwa, uMisghina Gebretinsae, lasweleka ngoJulayi 2011 lineminyaka eyi-62 ngenxa yobushushu obugqithiseleyo bentolongo elalivalelwe kuyo eMeitir. Kukho amaNgqina aliqela akhululwa kule ntolongo ngenxa yempilo enkenenkene.
Abasandul’ Ukubanjwa Kutshanje
Xa amaNgqina kaYehova akumazwe ngamazwe ayehlanganisene ukuze azimase iSikhumbuzo Sokufa KukaYesu Kristu ngoAprili 14, 2014, abasemagunyeni base-Eritrea babamba amaNgqina ayi-90. Abo babanjiweyo babequka amadoda namabhinqa abakubudala obuziinyanga eziyi-16 ukuya kutsho kwiminyaka eyi-85. NgoAprili 27, 2014, kwabanjwa amaNgqina ayi-31 awayehlanganisene ukuze afunde iBhayibhile. Izizathu zokuba abanjwe neemeko avalelwe phantsi kwazo azikaziwa okwangoku.
Ukuze ubone uludwe lwamaNgqina kaYehova avalelweyo ngenxa yokholo lwawo e-Eritrea, cofa le linki ingezantsi.
Babanjelwe Ukholo Lwabo—E-Eritrea
NgoJanuwari 23, 2015
AmaNgqina ayi-58 aye avalelwa engakhange asiwe enkundleni okanye amangalelwe ngokusemthethweni.
NgoDisemba 12, 2014
AmaNgqina ayi-64 aye avalelwa kungakhange kuxoxwe tyala okanye amangalelwe ngokusemthethweni.
NgoJulayi 25, 2014
Uninzi lwamaNgqina avalelwa ngoAprili 14 akhululwa, kodwa la ayi-19 abanjwe ngoAprili 27 asavalelwe; xa ewonke amaNgqina avalelweyo ayi-73.
NgoAprili 27, 2014
Kubanjwe amaNgqina amalunga nayi-31 ebeneentlanganiso.
NgoAprili 14, 2014
Ebudeni beSikhumbuzo Sokufa KukaYesu Kristu kwabanjwa amaNgqina angaphezu kwayi-90.
AmaNgqina ayi-52 avalelwa phantsi kweemeko ezingaginyisi-mathe.
NgoAgasti 16, 2012
Kwasweleka uYohannes Haile eneminyaka eyi-68, evalelwe phantsi kweemeko ezilusizi.
Kwasweleka uMisghina Gebretinsae, eneminyaka eyi-62, naye evalelwe phantsi kweemeko ezilusizi.
NgoJuni 28, 2009
Abasemagunyeni bambonzeleka ekhayeni lamaNgqina kuqhutywa inkonzo aza abamba amaNgqina ayi-23 aphakathi kweminyaka emibini ukuya kweyi-80. Inani lamaNgqina avalelweyo lantinga laya kutsho kwayi-69.
NgoAprili 28, 2009
Kwashiywa iNgqina lalinye aza amanye avalelwa kwiintolongo eziseMeitir.
NgoJulayi 8, 2008
Abasemagunyeni bagqogqa amakhaya neendawo aphangela kuzo amaNgqina, kwabanjwa ayi-24 yaye uninzi lwalusondla iintsapho.
Urhulumente uvala zonke iinkonzo ezingahambisaniyo nezine ezikhethwe nguye.
Ngo-Oktobha 25, 1994
Umyalelo osuka kuMongameli wohlutha amalungelo amaNgqina kaYehova wokuba ngabemi nawokufumana amalungelo asisiseko kwelo.
NgoSeptemba 24, 1994
UPaulos Eyassu, uIsaac Mogos noNegede Teklemariam bavalelwa kungakhange kuxoxwe netyala, yaye basathothoza nanamhl’ oku.
AmaNgqina kaYehova aqalisa ukubonakala e-Eritrea.